Ciidamada Dowladda oo howlgalo Balaaran manta ka wado Wadada Warshadaha ee magaalada Muqdisho | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Local News Ciidamada Dowladda oo howlgalo Balaaran manta ka wado Wadada Warshadaha ee magaalada...
Ciidamada Dowladda oo howlgalo Balaaran manta ka wado Wadada Warshadaha ee magaalada Muqdisho
Ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo kuwa Midowga Afrika ee Amisom, ayaa saaka aroortii ku kalahay Xaafadaha ku teedsan wadada Warshadaha ee Magaalada Muqdisho, halkaasi oo ay ka wadaan howlgalo culus oo dhalinyarada lagu soo qab-qabanayo.
Wararka ayaa sheegaya in ciidamada ay wadaan howlgal culus, kuwaasi oo bartilmaameedkooda uu yahay sidii lagu xaqiijin lahaa ammaanka Xaafadaha ku teedsan wadada Warshadaha, sidoo kalena waxaa lagu baadigoobayaa raga ka tirsan Shabaab ee xaafadahaasi ku dhuumaaleysanayaan.
Ciidamada Midowga Afrika ee Amisom, gaadiidkooda gaashaaman ayaa ku go’an wadooyinka, xaafadaha howlgalka uu ka socdo, waxaana aqalada galaya oo baaritaanka wada ciidamada Soomaalida oo dhalinyarada soo aruurinaya.
Ciidamada Howlgalkaan wada ayaa waxaa la sheegay inay yihiin ciidamo aad u badan oo Amisom iyo kuwa Dowladda isugu jira, iyada oo intaas ay sii dheer yihiin ciidamada alfa group ee sida qaaska ah u tababaran kuwaas oo aqoon gaar ah u leh ladagaalanka dagaalyahanada Alshabaab.
Howlgalada noocaan ayaa Muqdisho joogto ka ah, balse muddooyinkii dambe waxa ay ahaayeen howlgalada kuwa qorsheysan oo bartilmaameed leh.
Previous articleMuqdisho oo xukunno dil ah lagu fuliyay labo qof
Next articleXaqiiqa Journal 1